Imaaraadka oo diyaarado Gurmad ah gaarsiiyay Somaliland
HARGAYSA, Somaliland- Waddanka Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa noqday dalkii ugu horeeyay oo gurmad soo gaarsiiya maamulka Somaliland oo la tacaalaya dhibaatadii ay sababtay duufaantii Sagar oo saamayn xoog leh ku yeelatay gobolka Awdal.
Labo diyaaradood oo helicopter ah oo siday gargaar ayaa soo caga-dhigtay magaalada Hargaysa, kuwaasoo la sheegay inay qayb ka tahay gurmadka uu UAE u fidinayso shacabkii waxyeelladu soo gaartay.
Wararku waxay intaas ku darayaan inay jiraan gurmadyo kala duwan oo ku soo wajahay Somaliland.
Madaxweyne kuxigeenka Somaliland Cabdiraxamaan Saylaci oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegaya in dufaantu sababtay dhibaato xoog leh islamarkaana dedaal ugu jiraan sidii meelaha ugu daran loo gaarsiin lahaa gurmad.
Saylici wuxuu sheegay in diyaarado lagu gaarsiin doono Kaalmadan dadka tabaalaysan maadama waddooyinka badankooda ay jareen Daadakii ka dhashay Duufaantii Sagar.
Degmada Lughaye ayaa hada ugu daran meelaha ay saameeyeen Fatahaada roobabkii ka da’ay Somaliland.
Xukuumadda Somaliland ayaa xaqiijisay in gobolka Awdal ay ku dhinteen 25 qof sidoo kalena la waayay 27 ruux oo kale, halka dhaawacu gaarayo 12 qof.
Qoysas tirada badan ayaa dowladdu xaqiijisay in duufaantaas ay ku hanti beeleen islamarkaana ku barakaceen.
Somaliland oo shaacisay khasaaraha duufaantii Sagar
Somaliland 03.09.2018. 11:01
Feysal Cali Sheekh oo ah Maareeyaha Hay’adda Kahortagga Aafooyinka Dabiiciga ah ee...
Dowladda Soomaaliya oo lacag ugu deeqday Somaliland [DAAWO]
Soomaliya 04.06.2018. 22:19
IGAD oo ka digtay Duufaan cusub oo kusoo wajahan Xeebaha Puntland
Puntland 25.05.2018. 22:06
Aqalka Sare oo ansixiyey Xeerka Dalka looga mamnuucayo DP World
Soomaliya 15.03.2018. 15:08
Muuse Biixi oo la kulmay Danjiraha Britain ee Soomaaliya
Somaliland 25.11.2017. 14:18